0	June 18, 2017 12:33 PM
Source: Use ICTs productively: President | The Herald
PRESIDENT Mugabe has urged youths to use New Information Technologies productively, castigating rampant misuse of the Internet that he said was bringing undesirable foreign traditions into the country.
He said abuse of the Internet was also a cause for concern in the ruling Zanu-PF party where some members were fanning factionalism through social media.
President Mugabe said this while officially opening a Community Information Centre Dangamvura high-density suburb yesterday ahead of the Sakubva Stadium youth interface rally.
He said through the Ministry of Information Communication Technology, Postal and Courier Services, Government was committed to availing information centres throughout the country to enable youths to access information.
“Ndinoda kuti makorokoto mavana neInformation Centre kuno. Tinenge tiine tarisiro yokuti ichashandiswa nomutoo kwawo, vanhu vakwanise kuti pavanenge vachidawo kutapa zveInternet vange vachibatsirwa kuno,” President Mugabe said.
“Chatiri kungochema nacho chete ndechekuti vanhu vasakanganisa basa guru iri. “NeInternet vamwe vakushandisa kutapa tsika dzisina kunaka. Ndozvirikutichemedza chete. Kutukana ndoimwe nyaya yatinayo iyoyo.
“Hameno kuti tichagona here kuti tidzime nzira dzacho dzinoita kuti vanhu vatukane? Anenge ane zvake, anenge anezvondo zvakubuda. Ndinovimba kuti chichemo chedu ichocho kwazvo kwazvo kupolitics dzedu dzatinadzo nhasi tichakwanisa kuti tinzwikwe tirege kuita tsika dzakadaro,” he said.
The President called for cooperation between the Ministry of Primary and Secondary Education and the ICT Ministry to ensure Internet access to pupils.
“Takatanga Information Centre yakaita saiyoyi kuye kunonzi kwaMurombedzi kwaZvimba zvino dzafararira. Ndinovimba kuti pachava nekubatana neMinistry ye Education kunyanya nokuti vana vedu tinoda kuti vave nefundo yakadzama iyezvino. KuInternet uku kuzere neruzivo. Kana vakauya pano vakada kubata zvesciecnce, vakada kubata zvehistory, vakada kubata zvakasiyana siyana ruzivo rwuzere ikoko,” he said.
Coming to deep-rooted factionalism in the province which he said was raised by Minister of State for Manicaland Provincial Affairs Cde Mandi Chimene during a briefing, President Mugabe said the party would deal with the problem.
“Tauya nhasi kubasa redu guru remusangano weZanu-PF tiri vakokwi pahumiriro hwatakaita nevadiki vedu. Vadiki ava vanewo pfungwa dzavo,” he said. “Tanzwa Resident Minister VaChimene vachiti zvinhu zvirikuitwa hazvina kunaka. Hazvina kunaka hongu. Musangano wedu ndozvatinosungirwa kugarira pasi izvozvo kuti tizvinakise, tizvipfuudze tirambe tichinanga zvinangwa zvedu zvegutsaruzhinji,” the President said.
“Ava vanoda kutitsautsa vachazenge vachiona kuti kana vasiri mugwara, vasingafambe negwara ravazhinji vanenge varasika. “Kana vasingaone izvozvo tinoti marasika marasikazve munenge musina kuraswa nesu. Isu tirivanhu vakabatana, Vanhu vanoziva hutungamiri hwedu, vanhu vanoziva kuti hunochinjwa sei hutungamiri hwedu, haurambirwe, hausi hwekuba, aiwa huripachena. Ndozvatiri muZanu-PF. Ndozvatiri zvatakagaratiri kana pane vamwe vane zavarikuita…aiwa hazvinzwaro. Inyaya yatichakurukura zvikuru kwatiri kuenda uko,” he said.
The President also donated computers to six schools in Dangamvura as part of promoting E-Learning.
ICT Minister Cde Supa Mandiwanzira said a total of 70 community information centres had been opened countrywide.